DAAWO:Ciidamo culus oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka & Odayaal dhaqameed laga dalbaday in ay qayb ka ahaadaan xoreynta Gobolka…. – Puntlandtimes
DAAWO:Ciidamo culus oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka & Odayaal dhaqameed laga dalbaday in ay qayb ka ahaadaan xoreynta Gobolka….
January 11, 2019 Puntland PL
KISMAAYO(P-TIMES)- Degmada Af Madow ee gobolka Jubbada Hoose waxaa uu kulan ku dhex maray odayaasha dhaqanka degmada Af Madow iyo wasiirada qaybta ka ahaa waftiga madaxweynaha Jubbaland ee maalmahan ku sugnaa degmadaas.
Kulanka waxaa looga hadlay sidii odayaasha dhaqanka ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada Af Madow iyo ka shaqaynta is-dhaxgalka bulshada.
Sidii loo taageeri lahaa howlgalada xoreynta gobolka Jubbada Dhexe ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulanka dhex maray madax dhaqameedka degmada Af Madow iyo wafdiga wasiirada ah ee ka tirsan Jubbaland.
Odayaasha dhaqanka degmada Af Madow ayaa Jubbaland ku ammaanay dadaalada lagu xoraynayo deegaanada ay weli Al-shabaab gacanta ku hayaan.
Wasiirka wasaaradda Maaliyada Jubbaland Cabdirshiid Jire Qalinle ayaa madasha ka ballan qaaday in wasaarada maaliyadda Jubbaland ay dhowaan degmada Af Madow ka hirgelin doonto xafiis loogu talagalay qaadista canshuuraadka degmada kaasi oo dhowaan wasaaradda Maaliyada qorshaynayso in ay shaqaale cusub u diiwaan galiso.
Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha Jubaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa odayaasha dhaqanka kula dar daarmay in ay mar walba dadka ku baraarujiyaan ka qayb qaadashada horumarka isla markaasna ay ka qayb qaataan hawlgalada lagu xoraynaayo deegaanada ka maqan gacanta Jubbaland.